Julian Draxler Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Weedho Wanaagsan
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Julian Draxler Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Weedho Wanaagsan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Jule". Dabeecadeena Julian Draxler ee Sheeko Xaqiiqda ah iyo Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, cilaaqaadka nolosha / muranka, nolosha qoyska iyo wixii kale ee xaqiiqda ah ee aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, laakiin qaar ka mid ah tixgeliya joornaalka Julian Draxler ee waa mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Hore
Julian Draxler waxa uu ku dhashay 20th ee Sebtembar 1993 ee Gladbeck, oo ah magaalo ku taalla Waqooyiga Rhine-Westfalia, Germany. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Monika Draxler (oo ah xannaane) iyo aabihiis, Hans-Jürgen Draxler (oo ah ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta iyo maamulaha haatan ee wiilkiisa).
Julian waxay xididdo buluug ah. Waxa uu ku koray walaalihiisa magaalada warshad dhuxul-dhagaxeedka halkaas oo shaqaalihii buluugga ahaa ay sare u kaceen baahida.
Waxay kaloo ahayd xaafad muhaajir ah oo loo yaqaano in ay soo saarto tayada gudaha ee kubada cagta. Waxay ahayd meesha ay jecel yihiin Mesut Ozil iyo Leroy Sane (labadaba labadaba) ayaa ka yimid. Jaaliyada waxay ahayd goob kubadda cagta ah Schalke 04.
Qodobka shaqada ee ku dhexjiray dhaqanka maxaliga ah ee beeshu waxay u egtahay in uu saameyn ku yeelan karo taranka dhalinyarada.
Si kastaba ha ahaatee, kiiska Julian Draxler way ka duwan tahay. Waxa uu si cad ujiray kubbada kubbadda sida ugu dhakhsaha badan sida ugu dhakhsaha badan ee uu u socon lahaa. Go'aanka uu ku doonayo in uu noqdo ciyaaryahan kubada cagta ayaa bilaabay ka dib markii aabihiis uu u geestay ciyaarta Schalke oo aheyd ilmo - kooxdii uu ku biiray si uu u saxiixo. Si kastaba ha ahaatee, marnaba xirfadiisa ciyaareed kuma bilaabin iyada oo loo marayo nidaamka dhalinyarada ee kooxda.
Julian wuxuu bilaabay kubbadda cagta ee cawska ah ee BV Rentfort marka uu jiro da'da 5. Halkan hoose waa kaarka aqoonsiga ee Rentfort.
Julian Draxler's First ID Aqoonsiga
Rentfort wuxuu halkaa ka ciyaaray ilaa uu ka ahaa 7. Halkaas, waxaa loo arkaa mid ka duwan carruurta kale. Waxa uu gaari jiray wax carruur ah oo aan waligood gaadhin. Waxaa loo yaqaanaa xawaaraha iyo xoojinta isagoo labadoodaba ku ciyaaraya kubbada cagta ee cagaaran ama ciid.
Hore u kici kari waayay daroogada ayaa keentay in kooxo dhowr ah oo dhalinyaro ah ay u raraan sida loola dhaqmo. Julian ayaa dhameystiray heshiiskii ugu horeeyay ee uu ku soo qaato sanadka cusub ee da'yarta. Waxay ahayd mid aan sidaa u badnayn sidaa darteed qof ka mid ah da 'da' noocan oo kale ah ayaa la gelin doonaa miisaaniyadda isdhexgalka ee naadiyada dhalinyarada.
Julian waxaa iibsaday SSV Buer oo ka yimid naadiga uu ku nool yahay BV Rentfort. Ma uusan qaadan ilaa hal sano ka hor inta uusan Schalke 04 ku guuleysanin hibo hore oo tayo leh. Waxay adeegsadeen adeegyadooda 2001.
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Xiriirka
Ma jiraan wax qofku ku faani karo marka laga hadlayo jacaylka caruurnimada. Gaar ahaan mid aad ogtahay tan fasalka 5th. Tani waa kiiska Julian Draxler.
Jlina ayaa la kulmay Lena Stiffel markii ay ku jireen 5th Grade. Labaduba way kulmeen markii ay iskuul dhigteen. Xaqiiqdii, waxay ahaayeen hal maktabado. Waa ciyaaryahanka kaliya ee caanka ah ee leh fasalkiisa caruurnimadiisa sida wabi. Lena, sida shaaca ka qaaday sawirka hoose, waa mid aad u xiiso badan oo ku saabsan shaqadiisa.
Julian iyo Lena
Waalidkeed waxay la saaxiibtey Draxlers tan iyo intaanay dhalan. Waxay ku qaadeen ciyaaro badan oo caruurnimadooda ciyaaraya, waxay aadaan kulamadii Schalke, iyo isbarbardhiga mar walbaba qoysaskoodu midba midka kale xaflado ayey u qaadeen.
Xiriirkoodu maaha kaliya in la wadaago waqtiyo farxad leh. Laakiin xooggooda wadajirka ah inta lagu jiro xaaladaha adag ee adag iyo kuwa khafiif ah. Lena waa haweeney kaliya ee adduunka ku jirta oo ilmo ka tirtirta ilmada. Hoos waxaa ku qoran labadaba labada gacmood ay wadaagaan runtooda xagooda; bilowgii Romeo iyo Juliet nooca jacaylka adduunka.
Julian iyo Lena waxay muujinayaan xooggooda ayadoo loo marayo xaalado adag oo khafiif ah
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -In Jacayl la Midka kale
Draxler ayaa mar uun ku adkaysatay jirradoodii taasoo jabin lahayd xidhiidhkiisa Lena. Tani waa arrin ka mid ah Clarissa, oo muddo laba sano ah ku jiray Julian Draxler. Marna uma sheegi karto inkastoo Julian uu la joogay Lena sanado badan.
Clarissa waxa uu la socday Andrew, arday yar oo dhaqaaleed oo ay la kulantay jaamacadda. Waxay la jebisay isaga sababtoo ah waxay ugu dambeyntii ogaatay in soo jiidashada Julian ay ka badan tahay saaxiibtinimo oo ayan sii wadi Karin Andrew mar kale markii ay ogaatay. Nasiib darro, ka dib markii ay la jejebisay Andrew oo ahayd waqti isku mid ah Julian oo la xariira arrimaha xidhiidhka lala yeeshay Lena. Tani waxay ka tagtay niyad jab. Wararka ayaa tilmaamaya in Julian weli ay jaceyl u tahay iyada oo laga yaabo inay mar kale noqoto inay u ogolaato.
Julian-Unsettled Julian - Jacaylka Jacaylka
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Qoyska
Julian waxay ka timaaddaa qoys meelkasta oo dhulka ku yaal. Marka qoys qowlka dhexe ah si lama filaan ah ugu jeestaan Jarmal muwaadiniinta ugu horreeya oo dhan waxay u mahadcelinayaan kubada cagta kubada cagta.
GABAAN: Hans-Jürgen Draxler wuxuu ahaa sababta uu wiilkiisa Julian ku dhacay kubada cagta. Ka dib markii uu ku guuldareystay inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah, waxa uu sameeyay oo dhan wuxuu ahaa inuu wiilkiisa qaato si uu u daawado ciyaaraha Schalke 04. Tani waxay ahayd meeshii kubada cagta lagu soo celiyay mar kale Draxler. Hans-Jürgen Draxler ayaa hadda maamusha mustaqbalka wiilkiisa.
Julian Draxler iyo aabihiis, Hans-Jürgen Draxler
HOOYO: Monika Draxler waa hooyadii Julian Draxler. Waxay tahay qof marwalba ku dhexjirta qulqulka agagaarkiisa. Erayadeeda ..."Wiilkeygu wuxuu ku nooshahay riyadayda!" "Aniguna sidoo kale," wuxuu ku daraa Julian si dhakhso ah. Mar mar, Monika ayaa weydiisatay wiilkeeda in ay timaado matalaadaha dhunkashada kaas oo Julian aan waligeed diirin. Waa maxay xiriirka hooyada-ilmo-jeclaanta!
Julian, Hooyo, Monika ayaa wiilkeeda ku dhunkaday taageerayaasha
GRANDMOTHER: Julian's aabihii ayaa hadda ku noolaa sanado yar oo ka mid ah nolosheeda iyada oo ah nasiib wacan oo aan waxba qabaneynin laakiin si ay u daawadaan ninkeeda awoowe oo dhan. Hoos waxaa ku qoran sawirka gabadheeda (Monika) iyo Grandson (Julian).
Julian, Granny iyo hooyo
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -tacliinta
Xitaa marka uu sumcaddiisa isboortiga ku duuban yahay, Draxler wuxuu muujiyay heerkiisa heerka uu ku socdo inuu sii wado inuu wax ka barto shahaadada iskuulka Gesamtschule Berger Feld.
Iskuulku wuxuu leeyahay xiriir shaqo oo muddo dheer soconaya Schalke iyo kuwa kale Mesut Ozil, Manuel Neuer ayaa dhammaantood dhex maray portals. Draxler ayaa si toos ah uga tegey shahaado gacanta ah July 2012.
Julian wuxuu helayaa shahaadada dugsiga
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Qalbka Schalke's Heart
Markii lagu soo waramayay inuu ka yimid kooxo waa weyn oo Yurub ah, Draxler ayaa doortay Wolfsburg, oo uu kula tartamayo Schalke oo ah meeshii uu ku sii jeedo, isagoo saxiixay heshiis shan sanno ah oo uu la joogay 31 August 2015.
Markii la wareejiyay, Julian wuxuu rumaysan yahay in waqtigu ahaa isbedel. In uu erayada ... "Kooxda waxay i siisaa fursado fantastik ah, waxaana heysanaa koox xoogan "ayuu yiri Draxler. "Waxaan rajeynayaa inaan ka ciyaaro Champions League VfL waxaana u tartamaya koobab."
Go'aanka uu ka tagay Schalke ayaa jabtay. Waxay marnaba aaminsaneen daacadnimadiisa taasoo ka soo jiidatay jaceylkiisa caruurnimadooda sababtoo ah kooxdooda ayaa dhiman doonta waqti ay ugu baahnaayeen.
Tani waxaa soo raaca qeybo ka mid ah taageerayaasha taageeraya Julian sida 'Yuudas' waayo, wuxuu isaga u gacangeliyey.
Julian Draxler- Marka lagu calaamadeeyo 'JUDAS' by Schalke 04
Calaamadinta ciyaartoydii hore 'Yuudas' waa mid ka mid ah taageerayaasha Bundesliga oo lumiyay xiddigaha xiddigaha kooxo isku dheelitiran oo ku yaala Bundesliga. Manuel Neuer ayaa ka soo horjeeday Schalke halka Marco Reus iyo Gotze lagu caleemo saaray taageerayaasha Dortmund.
Sida dhammaan ciyaartoyda Schalke, Draxler Hates Dortmund. Wuxuu mar yiri: "Hadii aysan aheyn inay i maskaxaan, marnaba kuma biiri doono Dortmund." Si kale oo uu u soo xasuusto xusuusta xanuun badan, wuxuu go'aansaday inuu ka tago VfL Wolfsburg oo uu ku biiro PSG.
Julian Draxler Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Iimaanka Yuhuudda
Julian waa ciyaaryahan Jarmal ah oo dhashay Jarmalka. Wuxuu u hoggaansamaa caadooyinka Yuhuudda iyo caadooyinka.
Julian wuxuu aaminsan yahay in sharciga Yuhuuddu uu ku salaysan yahay Tawreed, shanta buug ee ugu horreeya ee Kitaabka Qudduuska ah: Bilowgii, Baxniintii, Laawiyiintii, Tirintii iyo Sharciga Kunoqoshadiisa. Waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in Ibraahim yahay aabbaha Yuhuudda.